May 5, 2020 - Lupyo News
ကိုဗစ်၁၉ နဲ့ပက်သက်ပြီး တရုတ်တို့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေ ထွက်ပေါ်လာ…
May 5, 2020 by Lupyo News
ကိုဗစ်၁၉ နဲ့ပက်သက်ပြီး တရုတ်တို့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေ ထွက်ပေါ်လာ… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါ ပြင်းထန်မှုကို တရုတ်ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြောင်း ထောက်လှမ်းတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာများ မီဒီယာသို့ ပေါက်ကြား။ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းမှ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တို့ လွတ်ထွက်ခဲ့သလား… တရုတ်သည် ဆေးဝါးအထောက်အပံ့ပစ္စည်းများတင်ပို့မှု လျှော့ချ၍ တင်သွင်းမှုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားမှုကို ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည့် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး အစီရင်ခံစာမှာ မီဒီယာသို့ ပေါက်ကြားခဲ့သည်ဟု CNBC က ယနေ့ရေးသားသည်။ ဇန်နဝါရီလကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စွဲ ကမ္ဘာ့ကူးစက်ကပ်ရောဂါပြင်းထန်မှုကို တရုတ်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် တမင်ရည်ရွယ် ဖုံးကွယ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် အမိမြေလုံခြုံရေးဋ္ဌာန၏ မေလ ၁-ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ စာမျက်နှာ ၄-မျက်နှာရှိ ထောက်လှမ်းရေးအစီရင်ခံစာမှာ Associated Press (AP) သတင်းဋ္ဌာနက ရရှိသွားခဲ့သည်ဆို၏။ အစီရင်ခံစာအရ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အစိုးရအနေဖြင့် Covid-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် … Read more
ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့
ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော် ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ လူတွေလဲ အရင်လို အများကြီး၊ ကားတွေလဲ ပြန်ပိတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ကျ၊ ဆင်‌‌ခြေဖုံးတွေမှာဆို ဘီယာဆိုင်တွေတောင် နေပူသလိုလိုနဲ့ ယင်းလိပ်လေးတွေကာပြီး ဆိုင်မှာ ပြန်သောက်လို့ရပြီ။ ဆိုက်ကားဂိတ်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ ပြန်စည်ကားပြီ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလဲ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးလို့။ စားဝတ်နေရေး ထွက်တာတင်မက အင်ယားကန်စောင်းမှာလဲ အလည်အပတ်ထွက်သူတွေ အရင်နီးပါးပြန်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် maskကို သေချာတတ်သူက တစ်ရာမှာ ဆယ်ယောက်၊ နောက် သုံးဆယ်က မေးစေ့မှာ၊ ခြေက်ဆယ်ကတော့ တပ်ကို မတပ်တာ။ အေးလေ ဘာတပ်စရာလိုလဲ၊ မွန်းကမွန်းပါဘိသနဲ့၊ ဒီလောက်ပူတဲ့ ရာသီဥတုမှာ။ စားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်။ ထွက်ရမှာပဲ။ ဒါက လက်လုပ်လက်စား … Read more
ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ သိန်း(၁၀၀) ပေါက်တဲ့ အလုပ်သမ လေးရဲ့ လေးစားစရာ လုပ်ရပ်
ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ သိန်း(၁၀၀) ပေါက်တဲ့ အလုပ်သမ လေးရဲ့ လေးစားစရာ လုပ်ရပ် ယခု သတင်းကို ( Zin Moe ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မော်လမြိုင် NWT ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ သိန်း(၁၀၀)ပေါက်တဲ့ အလုပ်သမမှ အလုပ်ရှင်ရဲ့စီမံပေးမှုနဲ့ ဘဝတူ အလုပ်သမတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးပါပြီ အလုပ်ရှင်မိသားစုရဲ့စီမံပေးမှုနဲ့ ထီသိန်း(၁၀၀) ကံထူးခဲ့သည့် ကွမ်းသီးပွဲရုံအလုပ်သမ မော်လမြိုင်မြို့သီရိမြိုင်(၁၂)လမ်းနေ မစန်းစန်းနွယ် မိသားစုမှ သူမနဲ့ အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ မော်လမြိုင် စမ်းကြီးရပ် ဦးနေဝင်းသူရဲ့ (NWT)ကွမ်းသီးပွဲရုံမှ ဘဝတူ အလုပ်သမ (၄၀)ကျော်ကို တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် တတ်နိုင်သလောက် အလှူအဖြစ် ဆန်/ဆီ/ကြက်သွန် ဖြူနီ/ငါးသေတ္တာ/ဆပ်ပြာမှုန့်/ ခေါင်းလျှော်ရည်/ကော်ဖီမစ်/ ခေါက်ဆွဲခြောက်စသည့် မီးဖိုးချောင်သုံး စားနပ်ရိက္ခာများ … Read more
ဘဲကြီးတစ်ဗွေ နဲ့ မမသင်ဇာ မဖွယ်မရာ ပုံများထွက်ပေါ်
ဘဲကြီးတစ်ဗွေ နဲ့ မမသင်ဇာ မဖွယ်မရာ ပုံများထွက်ပေါ် သင်ဇာဝင့်ကျော်ဟာ သူမရဲ့ အမိုက်စားဖတ်ရှင်နဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာတွေ့ရသူက အသက်ကြီးပိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဘောစိ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လှပကြော့ရှင်းမှုတွေကြောင့် ကိုကိုညီညီတို့ ရင်ခုန်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တစ်ဖက်မှာ သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်နေထိုင်မှုတွေဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုပီး ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ —————————- unicode ဘဲကွီးတဈဗှေ နဲ့ မမသငျဇာ မဖှယျမရာ ပုံမြားထှကျပျေါ သငျဇာဝငျ့ကြျောဟာ သူမရဲ့ အမိုကျစားဖတျရှငျနဲ့ ကောကျကွောငျးအလှကိုပိုငျဆိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျ။ ပုံမှာတှရေ့သူက အသကျကွီးပိုငျး စီးပှားရေး လုပျငနျးရှငျ ဘောစိ တဈယောကျဖွဈမယျလို့ သုံးသပျကွပါတယျ။ စှဲမကျဖှယျ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားနဲ့ လှပကွော့ရှငျးမှုတှကွေောငျ့ ကိုကိုညီညီတို့ ရငျခုနျရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ သို့သျောလညျး တဈဖကျမှာ … Read more
မလှတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ မရှိဘူး… အသုံးမကျတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတာပဲ ရှိတယ်
မလှတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ မရှိဘူး… အသုံးမကျတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတာပဲ ရှိတယ် ဘဝဆိုတာ ဖြတ်သန်းရခြင်း တစ်ခုမျှသာပဲ။ အချိူ့က ဘဝလက်တွဲဖော် ရတတ်ပေမယ့် အချို့ကတော့ ကံဆိုးစွာ ဘဝခြေထိုးဖော် ရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ အိတ်ပိတ်ကံစမ်းရသလိုပါပဲ။ အပြင်ပန်းကတော့ ရွေးတာပဲ။ အထဲမှာ ပါချင်ရာ ပါတတ်တာ။ အခန့်မသင့်ရင် ဘယ်တော့မှ မပေါက်မယ့် ထီလက်မှတ်ဟောင်းကြီးနဲ့ လက်ထပ်ရသလို ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာနေရင်တော့ အိမ်ထောင်ကျရတာ သိပ်တော့ မဆိုးရှာပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာရင်တော့ စိတ်ဆင်းရဲရတာနဲ့ သက်တမ်းတိုမယ်။ ရုပ်အိုမယ်။ ငွေကြေး အဆင်ပြေနေရင် ခံသာသေး။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေရတဲ့ကြား ငွေကြေးပါ အဆင်မြေ….ဒီကြားထဲ အိမ်ထောင်ရေးပါဖောက်ပြန်လာရင်တော့ ဒုက္ခနဲ့လှလှကြီးတွေ့တော့တာပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေဘဝမလွယ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာလို့ ကလေးမယူသေးရင် ကလေးမရအောင် ဆေးထိုးဆေးစား လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ဆေးနဲ့မတည့်သူဆို အသားတွေ မွဲလာမယ်။ … Read more
ရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပေမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံစကားပြောနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
ရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပေမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံစကားပြောနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး မိခင်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အပူမီးတွေ တောက်လောက်နေပမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးနေသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက် ဧည့်ခံနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ပုံရိပ်က အရမ်းကို သနားစရာကောင်းလှပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတစ်ယောက် မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကတော့ နာမည်ကြီးမြိတ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်း ဖြစ်နေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကြီးလည်း အခုချိန်ဆို ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းစွာ အနားယူနေပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ Source: N-H-K = ဗရမ်းဗတာ ဘီအက်ဖ်အက်ဖ်များ’s fb Bilie – Cele Connections —————————— ယူနီကုဒ်ဖြင့် ရငျထဲမှာအပူမီးတှတေောကျလောငျနပေမေယျ့ နာရေးသတငျးလာမေးသူတှကေို ဧညျ့ဝတျမပကျြဧညျ့ခံစကားပွောနတေဲ့ ဆုမွတျနိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယို ခဈြစရာကောငျးပွီး … Read more
ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက် နဲ့ ဖေါက်ပြန်တာ ပြောမနိုင်လို့ သားသမီးတွေကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
ယောက်ျားက နောက်တစ်ယောက် နဲ့ ဖေါက်ပြန်တာ ပြောမနိုင်လို့ သားသမီးတွေကို ရက်ရက်စက်စက်နှိပ်စက်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” ( တော်တော်ရိုင်းတဲ့ မိန်းမ ) ”လင်းမယား ချင်ချင်း အဆင်မပြေရင်” သားသမီး တွေကို ဆွဲ မထည့်ပါနဲ့” ယွကျားနောက်တစ်ယောက် နဲ့ ဖေါက်ပြန်တာ ပြောမနိုင်လို့ သားသမီးကို လုပ်တာတဲ့” ကမ္မောဒီယား ဘာသာဖစ် တစ်ချို မိခင်တွေ ယွကျားနဲ့ အဆင်မပြေရင် ယွကျား ကို ပြောမနိုင်တော့ ခလေးကိုပဲ ဖိရိုက် တာ မျက်မြင်တွေဖူး တယ်” မလုပ်ပါနဲ့ သနားပါ တယ်” အားလုံရဲ့ အမြင်လေးပြော ခဲ့ပါအုံနော် .. crd : celelawka ———————— unicode ယောကျြားက နောကျတဈယောကျ နဲ့ ဖေါကျပွနျတာ … Read more
“လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ”(ရုပ်သံ)
“လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ”(ရုပ်သံ) မူဆယ်မြို့နယ်မှာ ဒီလိုပြောင်းဖူးစိုက်တဲ့ တောင်ယာ ဧကပေါင်း သောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…ခုပြထားတဲ့ရုပ်သံတွေဟာ မူဆယ်မြို့နယ်ထဲက ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ တရုတ်ပြည်ကို ပြောင်းဖူးတွေပို့ဖို့ ထော်လာဂျီတွေရာပေါင်းများစွာနဲ့ သွားကြပေမယ့် နယ်စပ်ဂိတ်က အ၀င်မခံတော့လို့ ခုလိုတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ဒီပြောင်းဖူးတွေဟာ အစိုကြော်စား ချက်စားဖို့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ခူးရောင်းရတာဖြစ်ပြီး ခုလိုနယ်စပ်အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ပျက်ကုန်ဖြစ်သွားတာပါ လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကတော့ ပြောင်းဖူးတွေနဲ့အတူ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပါပြီ ရုပ်သံကြည့်ရန်(၁) ရုပ်သံကြည့်ရန် (၂) ရုပ်သံကြည့်ရန် (၃) Source : Sai N Lengjuinfa FB ———————- unicode “လနဲ့ခွီပှီး သှေးနဲ့ ခွှေးနဲ့ ရငြးထားရတဲ့ … Read more
အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား…. ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ
အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား…. ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ စူဠသုဘဒ္ဒါ မုန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ပြောရက်ကြတယ်…အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား….ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ… အင်ကြင်းပန်းမှာ ခါချဉ်လေးကပ်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် သုဘဒ္ဒါမုန်းရက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး… ပြိုင်ဘက်နဲ့ ယှဉ်ရင် အချစ်တွေအကုန်အစင် မရခဲ့လို့သုဘဒ္ဒါရင်မှာ နာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါတွေကို ရှင်နားလည်ရဲ့လား မင်းဆဒ္ဒန်…. ဟိမဝန္တာ တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ်မှာကျမဟာ ရှင့်အတွက်ဆို အသက်ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပါရက်နဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ် ချစ်ခဲ့တာတောင် ရှင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟင့်အင်း… ပထမချစ်ခြင်း မဟုတ်ရင် ဒုတိယအဖြည့်ခံတော့ ဘယ်မိန်းမသားကမှ မဖြစ်ချင်ဘူး…. မဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းဆဒ္ဒန်… မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး… ဒုတိယ ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး မင်းဆဒ္ဒန်ရယ်…ကျမ ရှင့်ကို စိတ်နာတယ်…. ဟိမဝန္တာ လွမ်းရိပ်မြိုင်မှာ အမုန်းတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ ကျမ ကျဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး…. အပယ်ခံတစ်ယောက်လို နာကျင်မှုမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို … Read more
အဆိုရှင် ဖြိုးပြည့်စုံကတောင်ချီးကျူးရတဲ့ထိ Covid 19 သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို လက်တန်းအလွတ်သီဆိုပြခဲ့တဲ့ ကိကိရဲ့ ဗီဒီယိုလေး …
အဆိုရှင် ဖြိုးပြည့်စုံကတောင်ချီးကျူးရတဲ့ထိ Covid 19 သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကို လက်တန်းအလွတ်သီဆိုပြခဲ့တဲ့ ကိကိရဲ့ ဗီဒီယိုလေး … CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ကိကိကတော့ အမှတ်မထင် သူမမေမေနဲ့ ဆော့ကစားရင်း ဈေးရောင်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေ ကိကိကို ပရိသတ်တွေအသိများလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အချက်ကျကျပြန်ပြောတတ်ပြီး စကားတတ်လွန်းတဲ့ သူမကို ပရိသတ်တွေ အချစ်ပိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်အဆိုတော်တွေကလည်း ပညာပေးသီချင်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သီချင်းလေးနဲ့ ပုံဖော်ထားကြတာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိကိလေးဟာ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ မိစန္ဒီတို့ သီဆိုထားတဲ့ Covid 19 သီချင်းလေးကိုကိုယ်တိုင်သီဆိုကာ သီချင်းအဆုံးမှာ သူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကို သတိပေးစကားလေးတွေပြောခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုသီဆိုပြခဲ့တဲ့ ကိကိလေးကို ဖြိုးပြည့်စုံကလည်း ” ဉာဏ်ကောင်းလွန်းသောကိလေးအကိုတောင် စာသားမေ့လို့ကောင်းတုန်း ” … Read more